Ukuhanjiswa kweemeko - iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / Imeko zokuHambisa
Zonke iimveliso esizidwelisayo kwiwebhusayithi yethu zithunyelwa ngqo zisuka kubavelisi okanye kubasasazi bethu abaseHong Kong.
Ixesha lokuhambisa ngenqanawa lixhomekeke kwindawo ekuyiwa kuyo. Singasebenzisa i-DHL Express ethatha iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-8 okanye iiNkonzo zePosi zaseSingapore ezinokuthatha kancinci, kwiimeko ezininzi, iphakheji iya kufika kwiintsuku ezili-12. Ukuhanjiswa kungahambelana namasiko.
Amaxabiso okuhambisa ahluka ngokuxhomekeke kubunzima bento ekhethiweyo, inkonzo yokuhanjiswa kunye nelizwe leposi. Ixabiso liya kubalwa ngexesha lenkqubo yokuphuma xa iinkcukacha zokuhanjiswa zifakiwe.
Ukulandela umkhondo opheleleyo kuyafumaneka nge-imeyile xa usiya.
Onke amaxesha okuhanjiswa achaziwe kwiintsuku zokusebenza (ngoMvulo-Lwesihlanu).